समाचार टिप्पणी : हैदरावाद हाउसमा हिन्दुत्व आदनप्रदान
- शिशिर ढकाल | शनिबार, चैत १९, २०७८
तीन दिने भारत भ्रमणका लागि दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरवाद हाउसमा स्वागत गरे । द्विपक्षीय छलफलपछि आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीले हिन्दुत्वलाई बढावा दिए । देउवाले पनि हिन्दुत्वको रुझान देखाए ।
कार्यक्रममा पहिले सम्बोधन गरेका मोदीले हिन्दुहरूको नयाँ वर्ष नवरात्रीमा देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा आफू निकै हर्षित भएको बताए ।' हिन्दुहरूको नयाँ वर्ष नवरात्री आज हो । आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न पाउँदा म निकै खुशी छु, उहाँलाई नवरात्रीको शुभकामना।'
घरेलु राजनीतिमा होस् वा कुटनीतिमा मोदीले हिन्दुत्वलाई बढावा दिइरहेको भन्‍दै मोदी भारतमै आलोचित छन् । आफ्नो आलोचनाबारे उनी भन्छन्, 'भारतको सर्वोच्च अदालतले नै भनेको छ- हिन्दुत्व धर्म होइन यो जीवन जिउने वैज्ञानिक तरिका हो ।'
मोदीको दावा छ, उनी सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देशन अनुसारनै अघि बढेका छन् । भारतीय जनता पार्टीले हिन्दुत्वलाई प्रवर्द्धन गर्दा विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्रमा अल्पसंख्यकका अधिकार खोसिएको आलोचकहरूको टिप्पणी छ । मुस्लिमहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गराउने उद्देश्यले ल्याइएको नागरिकता संशाेधन विधेयक होस् वा कश्मिर फाइल्स फिल्मको प्रवर्द्धन, धर्मनिरपेक्ष भारतमा भाजपाले हिन्दुत्वलाई कसरी बढावा दिइरहेको छ भन्ने कुरा यहीँबाट छर्लङ्गै हुने आलोचकहरूको मत छ ।
आम आद्मी पार्टीका अध्यक्ष तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले इण्डिया टूडे टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीको काम सबै धर्म र जातीको रक्षा गर्नु हो । उनी रामको कुरा गर्छन्, रामले त अछुत वृद्धको जुठो वयर खाएका थिए । भाजपा किन अछुत भनिने अल्पसंख्यक जातीमाथि व्यभिचार मच्चाउँछ । उनीहरूको सामूहिक हत्या किन मच्चाउँछ ? '
भाजपाका कार्यकर्तालाई कश्मिरी पण्डितमाथि भएको अत्याचारसम्बन्धी चलचित्रको पोस्टर टाँस्न खटाएकोप्रति केजरिवालले भनेका छन्, 'प्रधानमन्त्रीको काम कसैलाई अन्याय भएको छ भने न्याय दिनु हो । आज वर्षौँपछि कश्मिरी पण्डितमाथि भएको व्यभिचारलाई पर्दामा देखाउन कर छुट दिँदै कार्यकर्तालाई पोस्टर टाँस्न खटाउने होइन, पीडितलाई पुनर्स्थापितको दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो ।'
जसले जस्तोसुकै आलोचना गरोस्, धर्मनिरपेक्ष भारतमा मोदीलाई हिन्दुत्‍व प्रवर्द्धन गरेकोमा कुनै हिनताबोध छैन । सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्दा उनी भन्छन्, 'जीवजन्तुको रक्षाका निम्ति एनजीओ खोलेर मानिसहरूले काम गरिरहेका छन् । हिन्दुत्वले सबैको रक्षाका गर्छ । यसको प्रवर्द्धन गरेर भाजपाले के विगार्‍यो ?'
स्वागत मन्तव्यमै हिन्दुहरूको नयाँ वर्षको छेको जोडेका मोदीले अन्तिममा बनारसको वैभवलाई जोडे । आइतबार देउवा बनारस जान लागकोमा आफूलाई खुशी लागेको भन्दै मोदीले भनेका छन्, 'देउवाजी म खुशी छु, तपाइँ भोलि काशी जाँदैहुनुहुन्छ। काशी र नेपालको धेरै पुरानो सम्बन्ध छ । काशीको विशाल स्वरुप देखेर निश्चय पनि तपाइँ प्रभावित बन्नुहुनेछ ।'
नेपाल र भारतलाई अन्य माध्यमबाट जोडे पनि रामायण सर्किटमार्फत दुई मुलुक झन् विशेष रूपमा जोडिन लागेको मोदीको भनाइ थियो । १५ चैतमा श्रीलंकामा भएको विमस्टेक सम्मेलनका क्रममा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरबीच रामायण सर्किट अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
रामायण सर्किट रामसँग जोडिएका धार्मिकस्थललाई रेलमार्गमार्फत जोड्ने महत्वाकांक्षी परियोजना हो । याे परियोजना निर्माण भएको अवस्थामा अयोध्या, प्रयाग, नन्दीग्राम, जनकपुर, चित्राकुट, सीतामाढी, नासिक, हम्पी र रामेश्वरम क्षेत्रको ७५ सय किलोमिटर दूरी रेलमार्फत जोडिनेछ । यस सहमतिप्रति मोदीले भने, 'हामी भौगोलिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै नजिक छौँ । हामीले रामायण सर्किट बनाउने सहमति गरेका छौँ । यसले हामीलाई झनै नजिक ल्याउनेछ ।'
मोदीले नेपाल र भारतको हिन्दुसंस्कृतिको कुरा उप्काएपछि देउवाले पनि सांस्कृतिक सम्बन्धका विषयमा कुरा गरे । हिन्दुहरूको इच्छा जीवनमा एक पटक काशी र विश्वनाथ पुग्नैपर्ने रहेको बताए । 'मोदीले काशीको बारेमा चर्चा गर्नुभयो,' देउवाल भने, 'नेपालका हिन्दुहरू काशीमा आएर मृत्युवरण गर्न चाहान्छन् । आफ्ना पितृको कर्म काशीमा गर्न रुचाउँछन्, हामी यसरी जोडिएका छौँ । अहिले त गंगा पनि सफा भएछ यसले अझै धार्मिक पर्यटनमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।'
सांस्कृतिक सम्बन्ध र उच्च राजनीतिक तहमा भएको सौहार्द संवादले नेपाल भारतको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । समकक्षी मोदीसँग वार्तालाप गरेका देउवा शनिबारनै बनारस पुगेर पूजा-अर्चनामा सहभागी हुनेछन् ।
आइतबार उनले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटघाट गर्नेछन् । योगी त्यस्ता पात्र हुन् जो नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्ने वकालत गरिरहन्छन् । २०७६, ७ असारमा उनले नेपाल हिन्दुराष्ट्र बन्न तयार हुनुपर्ने बताएका थिए । 'विश्वका हिन्दुहरूले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्रको रूपमा लिन्छन् । आफ्नो पहिचान कायम राख्न नेपाल तयार हुनुपर्छ,' योगीको भनाइ थियो । योगीले प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष यही आशय व्यक्त नगर्लान् भन्न सकिन्न ।
औपचारिक विदेश भ्रमणमा जाँदा आफ्नै मुलुकमा पनि प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गर्ने चलन हुन्छ । भारत भ्रमणबारे देउवाले जानकारी नदिएको भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । यस्तै भ्रमणका क्रममा सत्तारुढ दलका नेताहरूसँग मात्र नभई अन्य दलका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गर्ने चलन हुन्छ । देउवा त प्रोटोकल मिचेर सुरुमै भाजपाकै कार्यालय पुगे । परिपक्व प्रधानमन्त्रीको यो शैली उत्ताउलो कुटनीति भन्दै आलोचित भइसकेको छ ।
हैदरवाद हाउसमा मोदीले कुरो उप्काएपछि देउवाले सांस्कृतिक सम्बन्धको चर्चा मात्रै गरेका छन् । रूपमा हेर्दा हैदरावाद हाउसमा देउवाले चर्चा गरेको धार्मिक विषयलाई विवादमा ल्याउनुपर्ने ठाउँ छैन । तर, कूटनीति यस्तो विषय हो जहाँ हाउभाउलाई पनि अर्थ्याइन्छ । मोदी हुन् वा योगी उनीहरू धर्मनिरपेक्ष नेपाल पनि हिन्दुत्वकै मार्गमा अघि बढेको देख्न चाहान्छन् । हैदरावाद हाउसमा प्रकट भएको हिन्दुत्वको मोदी बाछिटा नेपाल आउन नदिन देउवा कसरी अघि बढ्लान् प्रतिक्षित छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १९, २०७८, १६:२९:००